March 3, 2018 – Thutastar
အက်စစ်ဖြင့် ပတ်ခံရပြီး ၈ နှစ်ကြာအောင်ပိတ်လှောင်ထားခံရတဲ့ မန္တလေးမြို့က မနန်းမေဇင်ဦး ….
Comments Off on အက်စစ်ဖြင့် ပတ်ခံရပြီး ၈ နှစ်ကြာအောင်ပိတ်လှောင်ထားခံရတဲ့ မန္တလေးမြို့က မနန်းမေဇင်ဦး ….
Comments Off on သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ထိုင်းအမျိုးသမီးရဲ့ အလှူ
သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ထိုင်းအမျိုးသမီး မန္တလေး သံဃာ ၂၀,၀၀၀ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် သိန်းပေါင်းမြောက်များစွာ လှူဒါန်းမှုကြောင့် သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ထိုင်းအမျိုးသမီး နေပြည်တော်တွင်ကျင်းပခဲ့သော သာသနာတော်ဆိုင်ရာဘွဲ့တံဆိပ်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲတွင် သုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့တံဆိပ်ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ထိုင်းနိုင်ငံ ဓမ္မကာယဖောင်းဒေးရှင်းမှ အဖေ တောင်ကြီး ဇာတိ / ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား သမီး Lalitpat Janejob ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေး သံဃာ ၂၀,၀၀၀ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီး သိန်း 5000 လှုပြီးအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုဓမ်မသိင်ျဂီဘှဲ့တံဆိပျ ခြီးမွှငျ့ခွငျးခံရသော ထိုငျးအမြိုးသမီး မန်တလေး သံဃာ ၂၀,၀၀၀ ဆှမျးဆနျစိမျးလောငျးလှူပှဲတှငျ သိနျးပေါငျးမွောကျမြားစှာ လှူဒါနျးမှုကွောငျ့ သုဓမ်မသိင်ျဂီဘှဲ့တံဆိပျ ခြီးမွှငျ့ခွငျးခံရသော ထိုငျးအမြိုးသမီး နပွေညျတျောတှငျကငျြးပခဲ့သော သာသနာတျောဆိုငျရာဘှဲ့တံဆိပျဆကျကပျလှူဒါနျးပှဲတှငျ သုဓမ်မသိင်ျဂီဘှဲ့တံဆိပျခြီးမွှငျ့ခွငျးခံရသော ထိုငျးနိုငျငံ ဓမ်မကာယဖောငျးဒေးရှငျးမှ
Comments Off on လင်မယား အသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးည ကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း
လင်မယားအသစ်စက်စက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးညကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ဆိုထားတဲ့ သီချင်း (စိုင်းထီးဆိုင်) ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်တို့အဖေ ဖွင့်တဲ့သီချင်းတွေထဲမှာ စိတ်ထဲ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်ရတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ် ရှိတယ် … ဦးစိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ … အပြာရောင်မျက်ရည်တဲ့ … ♪♪♪ … ရှိတဝက်ပျက်တဝက် နှစ်ဖက်သောပါးပြင်ပေါ်မှာ လိမ်းတဲ့ သနပ်ခါး ကွက်ကျန်လို့နေ တစ်လိမ့်ချင်းလိမ့်လို့ စီးဆင်းကျလာရာလမ်း မြစ်နှစ်သွယ်လိုပဲ ထင်ကျန်နေ စီးပါလေစေ ချစ်သူရေ မသုတ်လိုက်နဲ့ အပြာရောင်လေး ဒီမျက်ရည်တွေနဲ့ တကယ်လှနေ… ♪♪♪ အဲ့စာသားနားထောင်ရင်း စဉ်းစားတယ် .. ဒီလူက လူဆိုးကြီးများလား … ရက်စက်ချက်ကလည်း ကမ်းကုန်ပဲ … ကောင်မလေး မျက်ရည်ကျတာကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်ပြီး အရသာခံနေတယ်ပေါ့ … အဲဒါနဲ့ ဆက်နားထောင်ဖြစ်တယ် … ♪♪♪
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားနေတိုးနဲ့ ဗီယက်နမ် မင်းသမီးငုရင်ထရန်ဟုရန်မေ တို့ ရိုက်ကူးခဲ့ကြတဲ့ တိမ်တိုက်တံတား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တခုဟာ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ အရမ်းကိုရေပန်းစားနေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ရဲ့ အသက်ပါပါနဲ့ အနမ်းမိုးရွာကြတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပရိသတ်တွေ များစွာစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလဲ အဲ့ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်ညီနေတဲ့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးပေါ့နော်။ အဆိုပါ တိမ်တိုက်တံတားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ သြရသ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် နေတိုး၊ ထွန်းထွန်း၊ ဗီယက်နမ်မင်းသမီး ငုရင်ထရန်ဟုရန်မေ၊ ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ သရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း နမူနာလေးက (၂)မိနစ်ကျော်သာ ရှိပေမယ့် ကြည့်ရှုသူ သိန်းကျော်သွားခဲံပါတယ်။ နေတိုးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက် ဗီယက်နမ်မင်းသမီးလေး ငုယင်ထရန်ဟုရန်မေတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့
ပိုက်ဆံကို ဘဏ်မှာအပ်ပြီး ကထိန်လည်း ခင်းမယ်ဆိုတဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁ သောင်း ကံထူးရှင်
Comments Off on ပိုက်ဆံကို ဘဏ်မှာအပ်ပြီး ကထိန်လည်း ခင်းမယ်ဆိုတဲ့ ၁၂ ကြိမ်မြောက် သိန်း ၁ သောင်း ကံထူးရှင်
၁၂ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲရဲ့ ကျပ် သိန်းတစ်သောင်းဆု ကံထူးရှင်ကတော့ ရလာတဲ့ငွေကို လှူဒါန်းဖို့နဲ့ ဘဏ်မှာ အပ်ထားဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်လို့ မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။ တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်ထိုးလေ့ရှိတဲ့ ဒေါ်ယုယုက ငါးစောင်တွဲထီများထဲမှ ကဋ ၅၉၂၁၆၆ နံပါတ်နဲ့ ကျပ် သိန်း ၁ သောင်း ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မန္တလေးမြို့ ခိုင်ရွှေဝါ ထီဆိုင်က ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ။ “ တစ်လတစ်ခါတော့ ထိုးတာပဲ ။ အခုတစ်ခါက ၅ စောင်ထဲက ပေါက်တာ။ အလုပ်ကတော့ မလုပ်တော့ဘူး။ သားသမီးတွေနဲ့ ပိုက်ဆံကို ဘဏ်လေး ဘာလေးအပ်ပြီး ဘဏ်တိုးလေးနဲ့ စားမယ်။ ကထိန်လည်း ခင်းမယ်။ ကျောင်းကိုလည်း ကြွေပြားတွေ ဘာတွေက အစ လုပ်ပေးမယ်။ ဘုန်းကြီးလည်း
ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီငှားစီးပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မမှတ်မိတော့လို့ ကယ်ရီသမားက အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေး
Comments Off on ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီငှားစီးပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်မမှတ်မိတော့လို့ ကယ်ရီသမားက အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ရတဲ့ မိန်းကလေး
သူငယ်ချင်းတို့ ကူညီပြီ ရှယ် ပေးကျပါအုံး ဒီမနက် ကောင်မလေး တယောက် ကယ်ရီ ငှားစီးတာ သူနေတဲ့ နေရာလည်းမသိဘူး ဘယ်ကို လိုက်ပို့ရမှန်းလည်း မသိဘူး အခုအိမ်မှာခေါ် ထားတယ်အင်းစိန် စော်ဘွားကြီးကုန်းဝန်း အောင်မင်္ဂလာ ၃ လမ်းလို့ပြောတယ်။ ကြည့်ရတာ စိတ်သိတ်မမှန် ဘူး ထင်တယ် ကာယကံရှင်များ ပေါ်ခဲ့ရင် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ် ပါ မောင်မောင် (မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရွှေပေါက်ကံရပ်ကွက်) ရွေှ့ပေါက်ကံ ရဲစခန်း (ဖုန်း 01695561) 09791701279 ============================ သူငယျခငျြးတို့ ကူညီပွီ ရှယျ ပေးကပြါအုံး ဒီမနကျ ကောငျမလေး တယောကျ ကယျရီ ငှားစီးတာ သူနတေဲ့ နရောလညျးမသိဘူး ဘယျကို လိုကျပို့ရမှနျးလညျး
ညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအတူတွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
Comments Off on ညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအတူတွေ့ရတဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးနဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်တို့ကတော့ အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်စီသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ တစ်ဝမ်းကွဲ ညီအစ်မတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲလိုလိုအတူတွဲတွေ့ရလေ့မရှိတဲ့ ဖွေးတို့ ညီအစ်မနှစ်ဦးကိုတော့ ဒီကနေ့ကစ်ကစ်ရဲ့ ညီမလေး နဒီရွှေရည်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ အတူတွဲပြီးတွေ့မြင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးက ချစ်ရတဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်စေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းတွေလည်း တောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ အရမ်းလှတဲ့ညီမလေးတို့နဲ့လို့လည်း သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာချစ်စဖွယ်ရေးသားထားပါသေးတယ်။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖွေးဖွေးတို့ညီအစ်မတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချစ်စရာညီအစ်မနှစ်ဦးကတော့ အနုပညာမှာထူးချွန်ကြတာမို့ အကယ်ဒမီဆုနှစ်ခုစီကို ဆွတ်ခူးထားနိုင်ကြပါပြီနော်။ သူတို့ညီအစ်မနှစ်ဦး ရုပ်ရှင်အတူတွဲပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာ ညီအစ်မနှစ်ဦးရဲ့ အတူတွဲပြီး အကယ်ဒမီ ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့နေ့လေးကလဲ တကယ်ကိုကြည်နူးစရာညလေး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာတွေ့ရတဲ့ ကစ်ကစ်တို့ညီအစ်မတွေကိုချစ်ရင် Share သွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ Myint Myat Source; Phway
တက္ကသိုလ်တက်နေသည့် သမီးဖြစ်သူထံ စားသောက်စရာများ လာပို့သည့် မိဘတွေရဲ့ ရင်နင်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်
Comments Off on တက္ကသိုလ်တက်နေသည့် သမီးဖြစ်သူထံ စားသောက်စရာများ လာပို့သည့် မိဘတွေရဲ့ ရင်နင်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်
တက္ကသိုလ်တက်နေသည့်သမီးဖြစ်သူထံ စားသောက် စရာများ လာပို့သည့် မိဘတွေရဲ့ ရင်နင့်စရာဖြစ်ရပ်စိတ်မကောင်းစရာလေးပါ 2.3.2018 10:30AM အချိန်က မုံရွာမြို့ကျောက္ကာလမ်း အုတ်ကန်တောရကျောင်းရှေ့စည်ပင်အမှိုက်သိမ်းကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မူဖြစ်ပွားခဲ့ ကားသမားမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ ပြီးမုံရွာယာဉ်ထိန်းဒုရဲအုပ်ဝင်းကိုကိုမှနာရီဝက်အကြာတွင်လယ်တီရပ်ကွက်၌ပြန်လည် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းလာသူနှစ်ဦးနက် တစ်ဦးသေဆုံးပြီးတစ်ဦးဒဏ်ရာများ ရရှိကာ ဒေဝဂတိအသင်းကားဖြင့်မုံရွာပြည်သူ့ဆေးရုံးကြီးသို့ ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါသေဆုံးသူ ဦး…….နှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ဒေါ်…. သည် မုံရွာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တွင်ကျောင်းတက်နေသည့် သမီးဖြစ်သူထံ စားသောက်စရာများလာပို့နေစဉ် အုတ်ကန်တောရရှေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် (ညီမစာမေးပွဲ အောင်မြင်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ပါစေ) Credit-KyawMinTun တက်ကသိုလျတကျနသေညျ့သမီးဖွဈသူထံ စားသောကျ စရာမြား လာပို့သညျ့ မိဘတှရေဲ့ ရငျနငျ့စရာဖွဈရပျစိတျမကောငျးစရာလေးပါ 2.3.2018 10:30AM အခြိနျက မုံရှာမွို့ကြောက်ကာလမျး အုတျကနျတောရကြောငျးရှစေ့ညျပငျအမှိုကျသိမျးကားနဲ့ဆိုငျကယျတိုကျမူဖွဈပှားခဲ့ ကားသမားမောငျးနှငျထှကျပွေးသှားခဲ့ ပွီးမုံရှာယာဉျထိနျးဒုရဲအုပျဝငျးကိုကိုမှနာရီဝကျအကွာတှငျလယျတီရပျကှကျ၌ပွနျလညျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ ဆိုငျကယျစီးနငျးလာသူနှဈဦးနကျ
“လူသာဆင်းရဲရင်ရဲမယ် သဒ္ဒါတရားလုံးဝမဆင်းရဲဘူးဆိုတဲ့ ဖိုက်စတားအဖွဲ့ဝင် ဦးကျင်ဝှက်”
Comments Off on “လူသာဆင်းရဲရင်ရဲမယ် သဒ္ဒါတရားလုံးဝမဆင်းရဲဘူးဆိုတဲ့ ဖိုက်စတားအဖွဲ့ဝင် ဦးကျင်ဝှက်”
ပြည်သူအချစ်တော် ဖိုက်စတားအဖွဲ့ဝင် လူရွှင်တော်ဦးကျင်ဝှက်ကတော့ လက်ရှိမှာလည်း အကြွေးတွေဝိုင်းနေ ပါသေးတယ်လို့ရင်ဖွင့်လာပြန်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်း အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ တင်နေတဲ့အကြွေးတွေ အကြောင်းပရိသတ်တွေထံ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟခဲ့ဖူးပါတယ်။အခုလည်းနင်လားငါလား အဆင်ပြေနေတာ တော့မဟုတ်ပဲ မကျေသေးတဲ့ အကြွေးလေးတွေကျန်ရှိနေပါသေးတယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေကြားခဲ့တာ ကိုစိတ်မကောင်းစွာကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဖိုက်စတားအဖွဲ့ဟာပွဲတွေမကြာခဏက နေရတယ်ဆိုပြီးအဆင်ပြေပြီလို့ ထင်နေကြတယ်လို့ ဦးကျင်ဝှက်ဆိုပါတယ်။တကယ်တော့ တစ်ချို့တစ်ချို့ထင်နေသလို့ အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ကလေးတွေကျောင်းစ ရိတ်၊တစ်အိမ်လုံးရဲ့ စာဝတ်နေရေးအားလုံး ကိုသူတစ်ယောက်ထဲကပဲ တာဝန်ယူထားတာကြောင့်ထင်သလောက် အဆင်မပြေပါဘူးလို့ ပရိသတ်တွေကိုဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဦးကျင်ဝှက်ဟာ အကြွေးတွေရှိနေသေးပေမယ့်လည်း ဆရာသမားတွေ၊အသိမိတ်ဆွေတွေထဲက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူတွေကိုလည်း နိုင်သလောက်လေး ကူညီတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကြွေးတွေ ဘယ်လောက်ရှိ နေပါစေ ပွဲကပြီးဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထဲပိုက်ဆံရောက်တာနဲ့ ဘယ်သွားပြီးလှူဒါန်း ရမလဲ ပဲတွေးမိနေတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲရောက်ရောက်ထမင်းတော့မငတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ဆပ်ဖို့ကျန်နေသေး တဲ့အကြွေးလေးတွေကလည်း
လူတိုင်းသိချင်နေကြတဲ့ “ပရဟိတမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်း”
Comments Off on လူတိုင်းသိချင်နေကြတဲ့ “ပရဟိတမင်းသားကြီး ဝေဠုကျော်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်း”
ဝေဠုကျော် သည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အတွက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု ရရှိထားသူ ဖြစ်ပြီး ပရဟိတ စိတ်အားထက်သန်သော သူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံကျော် မင်းသား ဖြစ်လင့်ကစား ပြည်သူများနဲ့ တရင်းတနှီး ပရဟိတ အလုပ်အကိုင် များကို လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ဝေဠုကျော်သည် ညောင်တုန်း မြို့ဇာတိဖြစ်သည်။ မိဘများက တက္ကသိုလ်ညိုလွင်မောင် + တက္ကသိုလ်ညိုညိုသိမ်း၊ ပန်းလှိုင်စာပေ တိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး၊ မွေးချင်းသုံးဦးရှိပြီး အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ဝေဠုကျော်သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ခန့်က ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် “အစိမ်းရောင်တောင်ကြား”နှင့် “နှလုံးသားဖြင့်ရင်းရပါသည်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ရုပ်ရှင်လောကကို ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ၁၉၉၉ ခုနှစ်က “မကြာမီမျှော်”